21.6.2019, Full time , Fishing
Company: Sinma Furnishings Co., Ltd.
•	အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	AGTI or B.Tech or BE (Civil) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Work location သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်း၊တတိယထပ်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
246 Days, Full time , Fishing
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းဖြင့်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.
Sinma Living Mall မှာရှိတဲ့ Sinma Furnishings မှ ဈေးနှုံးချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချနေသော Office Furniture များ၊ Table များ၊ Sofa Settee များ၊ Dining Set များ၊ Bed Room Set များ၊ Safe Box များနှင့် အခြားလိုအပ်သော ပရိဘောဂများကို လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 asalocal furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through6showrooms spread over3major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offersawide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.
This is why Sinma Furnishings offersawide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်တွင် နေ၊စား၊ငြိမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	အတွေ့အကြုံမလိုပါ။ •	အလုပ်အပေါ်စိတ်ဝင်စား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
Site Engineer Engineering & Technical jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Sinma Furnishings Co.,Ltd Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Site Engineer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon